Izakhiwo zokuphulukisa zesihlahla se-aspen, ukusetshenziswa okusebenzayo kwegxolo le-aspen emithi
Aspen: izakhiwo zokwelapha kanye nezinzuzo zegxolo le-aspen
Ukusetshenziswa kwamagxolo e-aspen ngezinhloso zokwelapha
Isondelene kakhulu nathi yonke ingcebo - i-aspen. Ikhula ezindaweni eziningi zaseRussia, e-Ukraine, e-Asia naseYurophu. Esikhathini eside esidlule, okhokho bethu bebazi mayelana nokuphulukiswa kwe-aspen, ukusebenzisa ijusi, izinso, amaqabunga kanye namagxolo ngezinhloso zezokwelapha ukuphatha nokuvimbela izinhlobo ezithile zezifo.
Isihlahla seminyaka eminyaka sanikezwa izakhiwo zomuntu ezingokwenkolo, khumbula okungenani isigxathu se-aspen, esasibhekwa njengesiluleko esihle kakhulu semimoya emibi ehlukahlukene. Kubantu isitshalo sibhekwa ngokuthi umuthi we-whisper, ukuzamazama ngenxa yokuthi amaqabunga endoda enhle ehlathini ayaqhubeka, eguquguqukayo. Kukholelwa ukuthi nguye owayebethelwe uJuda Iskariyothe, ngakho-ke igama elinye eliyaziwayo - uJuda gentian.
Izakhiwo zokuphulukisa ze-aspen ngokuvamile, izakhi eziwusizo ze-cortex, amaqiniso athakazelisayo
Iqiniso elithakazelisayo, eliqaphelwa yizakhamuzi zezindawo eziseduze namahlathi. Kufanelekile ukuba i-aspen iwile, njengoba izakhamuzi zehlathi zidla leli gxolo. Kungani lokhu kwenzeka? Phela, ukunambitheka akusho ukuthi kumnandi, kunalokho, kunalokho, kuyamunyu. Le mfumbe ixazululwa ngokulula, okuqukethwe kwezinto eziwusizo kuyo ezingeni eliphakeme kakhulu. I-Sucrose, i-fructose, inqwaba yama-carbohydrates, ama-tanins, ama-enzyme nama-amino acids. Konke lokhu kudla kuyisisusa esibalulekile semithi enempilo, ngakho-ke kuyadingeka kunoma yiphi inyama ephilayo.
Imithi yanamuhla yahlola ukubunjwa kwamagxolo, izinso namaqabunga omuthi, eveza phakathi kwezinye izinto, amafutha acids esigaba esiphezulu, esetshenziswa ku-cosmetology kanye nembonini yokudla.
Kuyathakazelisa ukuthi amaphilisi okuqala e-aspirin nemithi elwa namagciwane atholakala ngenxa yokusetshenziswa kwezinto eziqukethwe ku-aspen, futhi i-bex, ngokusho kososayensi, akuyona into ngaphandle kweglue etholakala e-enzyme etholakala e-aspen buds.
Ukusetshenziswa kwamagxolo e-aspen, uhlelo lokusebenza ngokusebenza
Amagxolo omuthi ahlala engxenyeni ewusizo kakhulu. Kungenxa yezinto zakhe zokwelapha ze-aspen zaziwa kabanzi nge-cosmetologists, odokotela nemithi yendabuko.
Imithi efana namathebulethi, ama-infusions, amafutha okugcoba okwenziwe ngesisekelo sezinto ezinamaqabunga e-aspen anomphumela omuhle kakhulu we-analgesic, ukuphatha izifo zesisu, ukwandisa ukukhiqizwa kwesimiso esiswini somzimba futhi ube nomphumela omuhle kuwo wonke uhlelo lokugaya umzimba, ukukhuthaza ukuphulukiswa kwamanxeba nokuvuthwa, ukukhulula ukuvuvukala, ukuphatha izinkinga ngokuvuthwa , isifo sikashukela mellitus.
Ukupheka ukusetshenziswa kwezinto eziwusizo zegxolo le-aspen
Kungenzeka, ngaphandle kokusebenzisa usizo olungaphandle, ukuvimbela nokuphatha izinhlobo ezithile zezifo ngosizo lwezinhlobonhlobo zamagxolo ase-aspen.
Iresiphi 1. Izifo ezihlangene kanye ne-pancreatitis
Enye ingilazi yamagxolo aqhekekile nesomisiwe esihlahla ukuze kugcwaliswe izibuko ezimbili zamanzi abilisiwe bese upheka imizuzu engu-30 ngomlilo ophuthumayo. Emva - susa izitsha, umboze umhluzi ngethawula bese uvumele ukuba ufeze amahora angu-5-6 endaweni engafinyeleleki elangeni.
Ihora elilodwa ngaphambi kokudla, thatha ama-3-4 wezipuni zomhluzi izikhathi ezintathu ngosuku amasonto angu-8, bese uthatha ikhefu amaviki angu-3-4 futhi uqhubeke uthatha i-tincture.
Iresiphi 2. Ukushisa, ukuvuvukala, i-bronchitis
¼ indebe eqoshiwe i-aspen bark exutshwe nenani elifanayo lamafihlekile namaqabunga, ukugcwalisa amakhilogremu ngamanzi. Bilisa phezu kokushisa okuphansi ngehora elilodwa, bese ugoqa.
Phuza isipuni ngehora ngaphambi kokudla izikhathi ezingu-2-3 ngosuku. Sebenzisa kuphela ngezinhloso zokwelapha, ukuvimbela akulungile.
Kufanelwe ukunakwa okukhethekile ukuthi ukugcoba, amafutha okugcoba, okwenziwe ngesisekelo semithi yokwelapha ye-aspen bark, ayinakho ukuphikisana. Okuhlukile, mhlawumbe, ukungabekezelelani ngabanye okungabangela ukuphendula okweqile, kodwa akukho. Noma kunjalo, thintana nodokotela ngaphambi kokuqala ukuzisiza.
Ukuma komzimba njengenkomba yempilo yakho
Ukwelashwa kwe-panaritium namakhambi abantu
Jelly kusuka ubisi lwe-almond
Ukuxhomeka kobulili bomntwana ngezici ezihlukahlukene
Waphupha owesifazane okhulelwe, ingane yakhe engakazalwa
Incazelo ye-herbaceous plant-camomile
Yini okufanele ngiyenze uma umuntu egula?
UFedor noSvetlana Bondarchuk bayazi ngokusemthethweni ngesehlukaniso
Yini okufanele ibe yindwangu, ukuze ingabangela ukubola?
Izinzuzo nezindleko zezitayela ezahlukene zobuhlobo bomshado
Izakhiwo zokwelapha nezimonyo zobumba
Graten kusuka broccoli
U-Alexander Panayotov: izindaba zakamuva-impilo yomculi ka-2017 - Ukushada noma umlingani? Izithombe ezincane kusuka ku-Instagram Panayotov
Lapho usika izinwele nezipikili ngoFebruwari 2018 yi-Oracle (ikhalenda yamaLunar)
Isaladi lesithelo ene-pomelo